Dr. Tint Swe's Writings: STDs links လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါစာများ
ဆရာရှင့်၊ မရှင်းတာလေးတခုမေးပါရစေရှင်။ ကျွန်မ post တခုဖတ်မိပါတယ်။ သူရေးထားတာက ခင်ပွန်းနဲ့အတူနေပြီး နာကျင်တာ၊ သွေးဆင်းတာ၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချွဲဆင်းတာတွေဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကုသဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်မသိချင်တာက ခင်ပွန်းနဲ့အတူနေပြီး နာရီအပိုင်းအခြားဘယ်လောက်မှာ ဒီလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်လာပါစေ။ စိုးရိမ်စရာရှိပါသလားရှင်။
တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မအသက် ၃၂၊ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ကလေး ၁ယောက်နဲ့ပါ။ ကျွန်မ ဆရာကိုမေးခွန်းတွေ အမြဲမေးနေကျပါ။ နောက်ထပ်လည်းမေးစရာတွေရှိပါသေးတယ်။ မေးနည်းစည်းကမ်းသိပေမယ့် အခုက ကိုယ့်ရောဂါအတွက်မဟုတ်ဘဲ မရှင်းတာကိုမေးတဲ့အတွက် မေးနည်းစည်းကမ်းမထည့်ဘဲမေးမိတာပါ။ စည်းကမ်းမလိုက်နာသလိုဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်ဆင့်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ရှင်။
ယေဘုယျမေးခွန်းတွေ ဖြေလေ့မရှိ။ သိလိုသူတွေက ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။ မေးရင် ဖြစ်တဲ့သူ အချက်အလက်သာ သိလို။
အရင်မေးခွန်းမှာ အဲတာတွေ မသိ။ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တာ သံသယ ရှိထိုက် မရှိထိုက် မှန်းမရ။ လိင်ကနေကူးတဲ့ ရောဂါတွေက အမျိုးမျိုးရှိ။ ဖြစ်လာတာတွေက ရောဂါလက္ခဏာရော ဖြစ်လာချိန်ကာလ မတူကြ။ ရမ်းဖြေမရ။
1. Cervicitis သားအိမ်ဝ ရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/cervicitis.html
2. Chlamydia (ကဲလ်မီဒီးယား) အဖြစ်များဆုံး STD http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/chlamydia-std.html
3. Chlamydia and Gonorrhea ကဲလ်မီဒီးယားနဲ့ ဂနိုးရီးယား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/chlamydia-and-gonorrhea.html
4. Condom and STDs (ကွန်ဒွမ်) သုံးပေမဲ့ ကူးနိုင်တဲ့ရောဂါတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/stds-and-condom_13.html
5. Condom new generation (ကွန်ဒွမ်) မျိုးဆက်သစ်လာတော့မည် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/blog-post_99.html
6. Condom Size Chart ကွန်ဒွမ် အရွယ်အစား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/condom-size-chart.html
7. Condom Standards စိတ်ချရတဲ့ (ကွန်ဒွမ်) ဆိုတာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/condom-standards.html
8. Condom မေးခွန်းတခု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/condom-question.html
9. Condom ယောက်ျားသုံး (ကွန်ဒွမ်) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/condom.html
10. Condoms Safety and Effectiveness (ကွန်ဒွမ်) ရဲ့ ထိရောက်မှု နဲ့ စိတ်ချရမှု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/condoms-safety-and-effectiveness.html
11. Contraceptives for women with STI/HIV လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ HIV ရှိ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကိုယ်ဝန်တားနည်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/contraceptives-for-women-with-stihiv-hiv.html
12. Dyspareunia (1) ဆက်ဆံချိန်မှာ နာကျင်တာ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/dyspareunia-1.html
13. Dyspareunia (2) ဆက်ဆံချိန်မှာ နာကျင်တာ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/dyspareunia-2.html
14. Dyspareunia (3) ဆက်ဆံချိန်မှာ နာကျင်တာ (၃) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/dyspareunia-3.html
15. Genital Herpes လိင်လမ်း ရေယုံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/genital-herpes.html
16. Genital warts လိင်လမ်းကြွက်နို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/genital-warts.html
17. Gonorrhea ဂနိုရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/gonorrhea.html
18. HIV - How to live withapositive person အတူနေမယ် မကူးစေရ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-how-to-live-with-positive-person.html
19. HIV Acute infection ချက်ချင်းဖြစ်လာသော ကူးစက်ရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-acute-infection.html
20. HIV Acute infection ချက်ချင်းဖြစ်လာသော ကူးစက်ရောဂါများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-acute-infection.html
21. HIV and AIDS by the Numbers http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids-by-numbers_30.html
22. HIV and AIDS drugs (1) ခုခံအားကျရောဂါ ဆေးတွေ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids-drugs-1.html
23. HIV and AIDS drugs (2) ခုခံအားကျရောဂါ ဆေးတွေ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids-drugs-2.html
24. HIV and AIDS http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids.html
25. HIV and CD4 စီ-ဒီ-ဖိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-and-cd4.html
26. HIV and Oral practice ပါးစပ်သုံးပြီး ဆက်ဆံတာနဲ့ HIV http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-oral-practice.html
27. HIV asaweapon http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hiv-as-weapon.html
28. HIV Duo Test ဆိုတာဘာလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-duo-test.html
29. HIV FAQ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/hiv-faq.html
30. HIV is evolving နှေးလာနေပြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-is-evolving.html
31. HIV medicines Side effects (1) ART ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/hiv-medicines-side-effects-art.html
32. HIV news ဆယ်ယောက်တယောက် HIV ပိုး ပျောက်နိုင် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/03/hiv_18.html
33. HIV Opportunistic infections အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကူးစက်လာတဲ့ ရောဂါတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-opportunistic-infections.html
34. HIV Prevention ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hiv-prevention.html
35. HIV screening tests http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-screening-tests.html
36. HIV Sexual transmission လိင်ကတဆင့် HIV ကူးစက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-sexual-transmission-hiv.html
37. HIV Summary အတိုချုပ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-cd4-viral-load-and-art.html
38. HIV Tests (1) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-1.html
39. HIV Tests (2) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-2.html
40. HIV Tests (3) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-3.html
41. HIV Tests စမ်းသပ်နည်းများ (၄) http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/hiv-tests.html
42. HIV vaccine ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-vaccine.html
43. HIV victims in Myanmar မြန်မာ့ HIV-AIDS တိုက်ဖျက်ရေး၏ သားကောင်များ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/12/victims-of-myanmars-hivaids-struggle.html
44. HIV ကိုတားနိုင်သည် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/04/hiv.html
45. HIV အတွက် Truvada ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-truvada.html
46. HIV အတွက် တနေ့တခါ သောက်ရမဲ့ ဆေးသစ် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/05/hiv.html
47. HIV ဆေးသစ် Edurant ကို FDA က အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-edurant-fda.html
48. HIV, CD4, Viral load and ART အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-cd4-viral-load-and-art.html
49. HIV/AIDS Myths and Facts http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hivaids-myths-and-facts.html
50. HIV: How it spreads ဘယ်လိုကူးစက်လဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-how-it-spreads.html
51. HIV-AIDS at glance http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-aids-at-glance.html
52. HIV-AIDS ရန်ကုန်ရှိ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သော၊ သွေးစစ်နိုင်သော လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/hiv-aids.html
53. How to live with HIV-positive person အတူနေမယ် မကူးစေရ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/how-to-live-with-hiv-positive-person.html
54. KTV-STD လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတချို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/ktv-std.html
55. Pregnancy and HIV http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hiv-hiv_15.html
56. STD rates rise dramatically http://doctortintswe.blogspot.com/2015/11/std-rates-rise-dramatically.html
57. STDs and Condom (ကွန်ဒွမ်) သုံးပေမဲ့ ကူးနိုင်တဲ့ရောဂါတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/stds-and-condom_13.html
58. STDs Basic လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများအခြေခံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/stds-basic.html
59. Syphilis test results ဆစ်ဖလစ် စမ်းသပ်နည်းအဖြေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/syphilis-test-results_13.html
60. Syphilis Tests ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ စမ်းသပ်နည်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/syphilis-tests.html
61. Syphilis Treatment (ဆစ်ဖလစ်) အတွက်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/syphilis-treatment.html
62. Syphilis ဆစ်ဖလစ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/syphilis.html
63. Vaginal Bleeding During Intercourse အတူနေစဉ် သွေးထွက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vaginal-bleeding-during-intercourse.html
64. Vaginal discharge Q and A အဖြူဆင်းခြင်း အမေး-အဖြေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vaginal-discharge-q-and.html
65. Vaginal infections မွေးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vaginal-infections.html
66. Vaginal itching မိန်းမကိုယ် ယားခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vulvovaginitis.html
67. Vaginal odor (ဗဂျိုင်းနား) အနံ့ဆိုးနေခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vaginal-odor.html
68. VDRL ကာလသားရောဂါ စစ်ဆေးနည်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/vdrl-tpha.html
69. Vulvovaginitis အမျိုးသမီးအင်္ဂါ ရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vaginal-itching.html
70. Warts ကြွက်နို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/warts.html
71. White discharge အဖြူဆင်းခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/pelvic-inflammatory-disease-pid.html
72. World AIDS Day ကမ္ဘာ့ (အေ-အိုင်-ဒီ-အက်စ်) နေ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/world-aids-day.html
လင့်အဟောင်းတွေပါနေရင် ဖွင့်မရ။ သိလိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို ဘလော့မှာစာရိုက်ရှာရင်ရနိုင်။ ဆောရီး။